1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP Carburetor Tune-Up | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Noma kunini lapho unemoto endala ehlala khona isikhashana, ungacabanga ukuthi i-carburetor idinga insiza. Igesi, ikakhulukazi uma ixutshwe namafutha izophendukela ku-varnish noma kungenjalo ikhiphe i-carburetor yakho bese idla ama-gaskets. Ngenkathi kunezithasiselo eziningi zokuhlanza i-carburetor ongazifaka ethangini lakho likaphethiloli noma ufafaze ngqo ku-carburetor, ngeke zisondele ekufezeni into efanayo ne-carburetor tune up. Noma imoto ibigcinwe ngaphandle kukaphethiloli ku-carburetor, ama-gaskets angoma futhi aqhekeke noma onakale ngokushesha uma uzama ukuyisebenzisa futhi. Ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi i-carburetor izosebenza kahle ukususa, ukuqaqa, ukuhlanza, nokuhlangana ngezingxenye ezintsha zekhithi ye-carburetor, ukufaka esikhundleni, nokwenza ukulungisa. Lezi yizinyathelo zokwenza i-carburetor tune up.
I-carburetor iyinto elula, eshibhile, nesikhathi efakazelwe kahle exuba kahle umoya nophethiloli ngaphambi kokungena ekamelweni lomlilo lokushisa. I-carburetor yalesi simoto i-carburetor efanayo esetshenziswa kuma-motors amaningi angaphandle ngisho nakubakhiqizi botshani baseLawn-Boy. Kunezingxenye eziningi ezincane ongafuni ukuzikhulula ngakho-ke kungcono ukuba nendawo yokusebenza ehlanzekile futhi ehlelekile.
I-carburetor iyingxenye yohlelo lwe-Fuel System oluqala ethangini legesi nolayini kaphethiloli. Ithangi elize nalawa ma-motors wezikhathi ezingama-50 bekungamathangi omugqa omabili acindezelwe. I-OMC ekugcineni ibalekele ukusebenzisa amathangi acindezelwe ngeminyaka yama-60 yaya emathangini owodwa wokudonsa umugqa. Ngokunikwa isimo sethangi lami nolayini bophethiloli, nginqume ukuguqula ngibe ithangi lomugqa owodwa wesimanjemanje ngokungeza iphampu kaphethiloli yokuhlanza iMikuni, engiyithenge kulayini cishe ama- $ 22.00, futhi ngishintshela isixhumi sikalayini kaphethiloli kulayini owodwa thayipha. CHOFOZA LAPHA ukubona incazelo nezithombe zephrojekthi yami yokuthuthukisa.amathangi amasha. Uma uhlose ukugcina yonke into yangempela kumoto yakho, khona-ke kunamakhithi atholakalayo wokushintsha imigqa, izixhumi, nezimpawu zamathangi akho okucindezela.
Kukhona isihlungi sikaphethiloli sale moto enamathiselwe ezansi kwesitsha se-carburetor. Lesi sihlungi siyisitsha sengilazi esenzelwe ukubamba amanzi nezidumbu futhi kufanele sisuswe ukuhlanzwa ngezikhathi ezithile. Ufuna ukuqinisekisa ukuthi ithangi likaphethiloli olisebenzisayo lihlanzekile futhi alinawo uvanishi, ukugqwala noma uphethiloli omdala. Kungumkhuba omuhle ukulahla uphethiloli ongasetshenziswanga bese uqala isizini ngayinye ngophethiloli omusha. Uphethiloli owuthengayo namuhla awugcini cishe isikhathi eside njengoba wawunjalo eminyakeni edlule. Futhi uma kungenzeka, hlala kude nophethiloli notshwala noma i-ethanol kuwo ngoba la mafutha athambekele ekuheheni umswakama futhi uphele ngamanzi kuphethiloli wakho. Izimoto zivame ukushisa ithangi likaphethiloli masonto onke noma kunjalo kodwa izikebhe, uma zingasetshenziswa njalo, uphethiloli ungahambi kahle. Kuyamangaza ukuthi bangaki abantu abacabanga ukuthi bangakwazi ukugijimisa imoto yabo kuphethiloli osuneminyaka eminingana ubudala.
Ingxube kaphethiloli / uwoyela yale moto ngu-24: 1. Lokhu kusebenza kungama-ounces ayi-16 we-TCW-3 alinganise uwoyela womjikelezo ongu-2 ethangini elingamalitha ama-3 lama-octane angama-87 kaphethiloli ongashayiwe noma ama-ounces angama-32 ethangi elingamalitha ama-5 .. Uwoyela wezimoto ezi-2 umjikelezo uguqukile eminyakeni edlule. Amafutha womjikelezo wamanje futhi ahamba phambili atholakala namuhla azoba nesilinganiso se-TCW-2. Kukhona into efana ne-TCW-3 nezinguqulo ezindala kepha inzuzo yokusebenzisa uwoyela omusha ukuthi uzothola ukuthambisa okungcono kanye nokwakhiwa kwekhabhoni okuncane kunamafutha amadala. Imiyalo yokuxuba yokuqala yalezi zimoto ezindala ikhuluma ngesilinganiso esingu-2: 16 sikaphethiloli oholile kuya kuwoyela ojwayelekile wezimoto ezingama-1 kodwa kufanele ukhumbule ukuthi kuningi okushintshile kusukela ngaleso sikhathi. I-TCW-30 yisilinganiso kuwo wonke uwoyela womjikelezo ongu-3 ongawuthenga namhlanje. Uma unamafutha endala e-TCW-2 ahleli nxazonke, qhubeka uwasebenzise, ​​mhlawumbe ngawo wonke amanye amathangi agcwele aze ahambe. Futhi, akukho nzuzo ekusebenziseni i-octane ephakeme noma uphethiloli onomthofu ukuze unamathele kuma-octane angama-2 angabizi kakhulu kaphethiloli futhi imoto yakho izojabula. Ama-motors womjikelezo omusha ama-87 asebenzisa ingxube kawoyela engu-2: 50 kepha lokhu akukhona uwoyela owenele wemoto yakho ngenxa yohlobo lwama-bearings analo ngaphakathi. Ungasebenzisi noma yini engaphansi kwenhlanganisela engu-1: 24 noma ungalimaza imoto yakho.
I-carburetor ixuba izilinganiso ezifanele zomoya nophethiloli engxenyeni ye-athomu. Inani lenhlanganisela kaphethiloli / yomoya evunyelwe kumasilinda linquma ijubane namandla. Uphethiloli nomoya kuxubene ne-venturi, evame ukubizwa ngokuthi umgqomo. Le carburetor elula inomgqomo owodwa kuphela. I-venturi imane ingumkhawulo osayizi ngokucophelela ku-carburetor lapho umoya odonswa enjinini kufanele udlule khona. Njengoba umoya udlula kulo mkhawulo, uyashesha ubangele ingcindezi ephansi yokumunca uphethiloli ngendiza ekhipha uphethiloli ngaphakathi kwe-venturi lapho iphenduka khona umhwamuko. Ijethi idonsa uphethiloli wayo endishini ye-carburetor equkethe inqolobane encane kaphethiloli esitsheni se-carburetor. Inani likaphethiloli esitsheni se-carburetor lilawulwa yinhlangano ye-float ne-float valve egcina isitsha sigcwele uphethiloli. Amaleveli wenaliti ephezulu futhi anejubane eliphansi alungisa isilinganiso sikaphethiloli emoyeni ngaphakathi kwemikhawulo emincane. Umthamo womoya ongena emgqonyeni we-carburetor ulawulwa yi-valve uvemvane olusontwe luvulwe yisigaxa sempintsha.
Le carburetor nayo inokudinwa. Uma udonsa inkinobho yokuminyanisa ngaphambili kwensimbi, ivalveve yesibili yovemvane, etholakala enhla nomfula we-venturi iyavalwa ibangela uphethiloli ophakeme oya enhlanganisweni yomoya edingekayo ukuqala imoto ebandayo. Lapho uqala imotor yakho, udinga ukuvala ukuminyaniswa ngokudonsa isibonisi esiminyanisa. Lapho imoto "pops" noma "sputters", ungavala ukuminyana njengoba i-carburetor isilungele ukusebenza ngokujwayelekile.
Johnson Seahorse 5.5 Carburetor Buka yamila
I-Carb Kit I-NAPA Ingxenye Yenombolo 18-7043 noma ukufaka esikhundleni seNombolo Yengxenye ye-OMC 382047, 3832049, 383062, 383067, noma i-398532
Ngikhokhe u- $ 15.49, le kit ayibandakanyi iflothi. Uma kudingeka, ungayithenga ngokwehlukana cishe nge $ 3.00
I-Carb Kit Inombolo yengxenye ye-OMC 382045 noma i-382046 NAPA / iSierra Ingxenye yeNombolo 18-7043
Susa phambi Panel futhi emoyeni Silencer
Susa ngezikulufo ukuthi ubambe Inkinobho Choke, Slow futhi High-Speed ​​Control Knobs, bese uslayida iphaneli phambili futhi off.
Susa Control Knobs
Front Pannel Kukhishwe
Susa nut ukupakisha ukuze kancane ijubane jet.
Susa Slow Speed ​​Ukupakisha Nut
Slow Speed ​​Ukupakisha Nut
Susa 4 nezikulufi ubambe phezu silencer emoyeni bese ukhipha silencer emoyeni yokuhamba phambili futhi ephakamisa kude.
Susa Air Silencer Izikulufu
Phakamisa futhi Susa Air Silencer
Nqamula entwasahlobo ukungezwani ebamba isondo isikhathi kusengaphambili isigwedlo ngokumelene isizinda isikhathi kusengaphambili.
Susa Isikhathi Advance Amaphaphu Spring
Susa ukuxhumana kwe-mpintsha. Sebenzisa isithombe esingezansi njengesethenjwa sokuhlanganisa kabusha. Khipha izikulufu ngokwanele ukuvumela ukuxhuma kushelele.
Susa mpintsha nokuxhumanisa
Susa isiqeshana sokugcina sesiginali sesikhathi esiseduze. Qaphela ukuthi ungasidedeli lesi siqeshana. Slayida isigwedlo sokuhamba kwesikhathi ngakwesokudla bese ususa.
Isikhathi Advance Lever Isiqeshana
Nge isikrufu 7 / 16, susa nati ezimbili ubambe umzimba carburetor kuya ezininginingi eyanele.
Uma ukhetha, ungathuthukisa uphethiloli nophethiloli wokulunywa ngenkathi i-carburetor yakho ivaliwe. CHOFOZA LAPHA ukubona inqubo lokhu ngcono.
Ukuqaqa Kwesihlungi Carburetor
Le carburetor inesihlungi sikaphethiloli sephethiloli ezansi kwe-carburetor. Susa isitsha sengilazi. Khipha "umuthi omncane" we-sprocket bese uslayida isilinda sokuhlunga. Susa i-gasket yenjoloba eyindilinga. Kubalulekile ukuhlanza zonke lezi zingxenye. Ungafafazi isihlanzisi se-carburetor kunoma yimaphi ama-gaskets enjoloba ngoba irabha lingancibilika. Le gasket ibalulekile ukwenza uphawu oluqinile lomoya ngendishi yengilazi.
Susa isikulufu bese ususa amajetshi aphakeme futhi ahamba kancane ngaphambili kwe-carburetor. Susa ama-washer amadala okupakisha. Lokhu kungathatha umsebenzi othile ukususa lawa ma-washer amadala okupakisha kepha uzomiselela lawa ngama-washer amasha wokupakisha bese wenza kabusha kwakho.
Susa Slow Speed ​​Jet
Susa High-Speed ​​Jet
Carburetor Jets Kukhishwe
Susa izikulufo ezibamba amahafu aphezulu nangaphansi omzimba we-carburetor ndawonye. Donsela phakathi amahafu. I-gasket phakathi kwalezi zingxenye ezimbili izothathelwa indawo nge-gasket entsha evela kukhithi ye-carb.
Izikulufu Carburetor Umzimba
Hlukanisa Upper futhi Lower
Le carburetor ine-float yokuqala kukakhokho. Qaphela ukuthi iflothi yonakala futhi yahlanganiswa ne-varnish. Lo carburetor akaze asebenze kahle ngaphandle kokudilizwa, ukuhlanzwa, nokuhlanganiswa kabusha ngezingxenye ezintsha zekhithi ye-carb.
Susa Carburetor Aweshubhu
Susa Carburetor Bowl Gasket
Susa iphini lokulinganisa le-float. Le phini izothathelwa indawo iphini entsha evela kukhithi ye-carb. Susa ukuhlangana, ukuntanta kanye nomhlangano we-valve. Uzobe uhlangana kabusha nomhlangano omusha we-valve we-float ovela kukhithi ye-carburetor tune up.
Susa Float Pin
Susa Aweshubhu Valve
Susa Float Valve LoMhlangano
Susa umbhobho wejubane eliphezulu. Susa ipulaki le-aluminium eliyindilinga ngaphezulu kwe-carburetor. Lokhu kwenziwa kalula ngokumba imbobo encane enkabeni bese ugoqa esikrinini sensimbi ukuze ukhiphe ipulaki le-aluminium. Kukhona ipulagi entsha kukhithi ye-carburetor tune up. Hlanza indawo engemuva kwepulagi. Uma usuhlanzekile, shintsha ipulagi ngokuthepha kancane endaweni enesibambo se-screwdriver noma isando esincane. Kungumqondo omuhle ukubeka ifilimu le-silicone emaphethelweni epulagi ye-aluminium ukuvimbela ukuvuza komoya.
Susa High-Speed ​​Nozzle
Susa Aluminium Plug
Sebenzisa Intulo Susa Plug
Ngokuphelele ukuhlanza izingxenye carburetor.
Futha zonke izingxenye zensimbi nge-carburetor cleaner. Ungahle uthande ukumanzisa lezi zingxenye ubusuku bonke ekanini lekhofi. Sula phansi bese uqhuma zonke izingxenye ngomoya ocindezelweyo. Khipha zonke izindima uqiniseke ukuthi akukho ukuvinjelwa. Eziningi zalezi zindinyana zincane kakhulu futhi zivimba kalula izinhlayiya eziphambukayo. Bamba umzimba we-carburetor elangeni elikhanyayo bese uhlola eduze.
Reassemble le Carburetor
Ngokuyinhloko, ukuhlanganisa kabusha i-carburetor kufana nokudlula ezinyathelweni zokuqaqa kodwa emuva. Ungahle ubonakale ezinye zezithombe ezifanayo ezisetshenziswe ekuhlukaniseni nasekuhlanganeni. Kunezinto ezimbalwa mayelana ne-carburetors okufanele uzazise ukuze unakekele okudingekayo ukuze i-carburetor yakho isebenze kahle ngemuva kokuthi ibuyiselwe ndawonye. Uzofuna ukuhlangana kabusha ngezingxenye ezintsha kusuka kukhithi yakho ye-carburetor tune up. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi alukho uthuli, isihlabathi, izingcezu nezingcezu zezinto ze-gasket noma enye into yangaphandle engabambeka komunye wemigwaqo emincane. Okunye okukhathaza kakhulu lapho uhlanganisa i-carburetor ukwenza isiqiniseko sokuthi ngeke kube khona ukuvuza komoya. Ukuvuza komoya okuncane okuzungeze i-gasket noma ukufaka kungadala ukuthi i-carburetor ingasebenzi kahle. Wake wazama ukuncela i-soda ngotshani ngophini omncane kuwo? Ukuvuza komoya okuncane kakhulu kuzolahla umthethonqubo ofanele wenhlanganisela kaphethiloli / yomoya ophethwe yi-carburetor. Thatha isikhathi sakho wenze lokhu kahle. Uma kunesidingo, bhekisa kumdwebo oqhumayo ukuze uqiniseke ukuthi usebenzisa wonke ama-washer afanele nama-gaskets. Lokhu akuyona enye yaleyo maphrojekthi lapho ufuna ukuvumbulula izingxenye ezisele ngaphandle kokuthi kube yizingxenye ozifakile esikhundleni sezingxenye ezintsha ezivela kukhithi ye-carburetor tune up kit.
Hlanganisa eziphezulu inxenye Carburetor
Isikulufa e umlomo wombhobho ngesivinini futhi agxumele ku gasket kumqashi. Qaphela: obomvu nokupakisha Washer kuboniswe izithombe ngezansi ayilungile. Gasket kumqashi mkhulu, sithambile, futhi tan ngombala.
Isikulufa emhlanganweni iflothi valve. Faka entsha iflothi inaliti unamathisele entwasahlobo inaliti. iflothi inaliti yakho endala kungenzeka ungabi nayo i entwasahlobo izinaliti ezintsha ithiphu iraba futhi zidinga entwasahlobo ukugcina kusukela ababambelela. Isithombe se-amasha namadala iflothi valve izinaliti. Inalidi ubudala iphezulu. It has no ithiphu zenjoloba noma indawo clip ku entwasahlobo inaliti. Entwasahlobo iflothi kubalulekile kakhulu ngakho qaphela ukuba ungasho amazwi nilithukulule entwasahlobo inaliti noma ukhohlwa ukuyifaka (njengoba ngangenza). Faka iflothi entsha bese ukuntanta lomnyango pin. Isiqeshana entwasahlobo iflothi inaliti kuya lomnyango iflothi.
Miselela High-Speed ​​Nozzle
New Aweshubhu Valve kusukela Kit
Ukufaka esikhundleni Float Valve
Ukufaka esikhundleni Float Valve LoMhlangano
New Aweshubhu Valve Isiqeshana
Ahambayo Futhi Pin
Isiqeshana entwasahlobo iflothi inaliti kuya lomnyango iflothi.
Lungiselela Isigamu Ngezansi we Carburetor
Usebenzisa ibhala lokuprakthiza, susa ngobumnene noma imiphi imibhoshongo emgodini lapho isisekelo sombhobho wesivinini esiphezulu. Qiniseka ukuthi ushaya noma yiluphi uthuli ngezingcezu zensimbi ngepayipi lomoya. Lokhu kuzodinga ukwakha uphawu oluqinile lomoya ne-boss gasket. Hlanganisa kabusha isihlungi se-glass fuel. Qiniseka ukuthi i-gasket yenjoloba ikhona ukwakha uphawu oluqinile lomoya ngendishi yengilazi.
Miselela Hlunga Screen Gasket
Miselela Kukhanseliwe Hlunga Screen
Miselela Hlunga Bowl Seal
Faka eziphezulu Ngezansi Isigamu we Carburetor
Qinisekisa ukuthi i-gasket ihlanganiswe nezimbobo. Qinisa izikulufo ukuze zikwazi ukuthwebula kodwa qaphela ukuthi ungadluli ngokweqile. Qinisa izikulufu ngephethini yezinkanyezi ukuze amahafu amabili acindezelwe ndawonye ngokulinganayo.
Joyina eziphezulu Isigamu Ngezansi Carburetor Umzimba
Faka Ukupakisha washers kanye Nuts High futhi Slow Speed ​​Izinaliti
Faka ama-washer amabili okupakisha abomvu emigodini yenaliti ephakeme neshesha kakhulu. Njengoba i-nut packing iqiniswa, lawa ma-washer azokwanda futhi akhe uphawu oluqinile lomoya oluzungeze izinaliti eziphakeme nezisheshayo. Bazodala ukungqubuzana okudingekayo kulezi zinaliti ukuze babambe ukulungiswa kwabo. Okwamanje, sebenzisa iminwe yakho kuphela ukugoqa amantongomane okupakisha. Amantongomane okupakisha amade aya phezulu. Qhubeka uqinise umuthi ophansi wokupakisha kepha okungenhla kuzodingeka kususwe ukuze kubuyiselwe ipuleti lobuso.
Lungiselela Carburetor neNtaba kuya ezininginingi eyanele
Futhi, kubaluleke kakhulu ukuvimbela ukuvuza komoya. Kufanele unciphise i-gasket eyeqile ukuvumela i-carburetor ukuthi ihlangane nokugeleza kaningi. Sebenzisa ifayili ukufaka noma yikuphi ukuphakama nama-burrs. Lapho ubona insimbi engenalutho nxazonke, uyazi ukuthi awusenamabala aphezulu. Qiniseka ukuthi uqhuma ngepayipi lomoya ukuze ususe noma yiziphi izinhlayiya. Ikhithi ye-carb iza nama-gaskets osayizi ahlukile ngoba ikithi elifanayo lingasetshenziselwa ama-carburetors amakhulu. Qiniseka ukuthi unama-gaskets osayizi afanele. I-gasket yesibili isiza ukuvikela i-carburetor ekushiseni kwenjini.
Beka ama-gaskets amabili kokuphindwayo kokudla. Sebenzisa umunwe wakho bese uthambisa lawa ma-gaskets ngogcobo oluthile ukuze uqinisekise ngophawu olungangeni moya. Qiniseka ukuthi unama-gaskets osayizi afanele. I-gasket yesibili isiza ukuvikela i-carburetor ekushiseni kwenjini. Sebenzisa isikrufu esingu-7/16 ukuqinisa amantongomane amabili. Lawa manati kudingeka adonswe kodwa qiniseka ukuthi awudluli ngokweqile.
Beka gaskets amabili ezininginingi.
Namathisela Finished Carburetor ukuba ezininginingi
Qinisa Carburetor Nuts
Faka Isikhathi Advance futhi mpintsha nokuxhumanisa
Shelelezisa kusengaphambili mpintsha emuva endaweni bese ushintsha isiqeshana isamba.
Mpintsha Advance Isamba Isiqeshana
Shintsha ukuxhumana kwe-mpintsha. Phawula ukuthi ingxenye eyisicaba yokuxhuma iphikisana nengxenye eyisicaba yeposi yokugoba kanye nengalo yesikhathi sokuhamba kwesikhathi. Qinisa izikulufo ukuze ukuxhumana kungabi nokudlala kepha qaphela ukuthi ungapheli.
Lungisa Isikhathi Advance Base
Usebenzisa isikrufu esingu-5/16, lungisa isisekelo sesikhathi ukuze isondo liqale ukuthinta isisekelo sokubeka isikhathi kumaki "lokuqala". Lapho i-throttle iphendukele kokuthuthukile, lungisa omunye umkhawulo wesisekelo sokubeka isikhathi ngaphambi kokuthi ukuxhumana kwe-mpintsha kubambe ivalvevemvane ivuleke kakhulu.
Buyisela Air Silencer futhi Face Plate
Susa inaliti yejubane elihamba kancane nomuthi wokupakisha. Buyisela ukuthula kwomoya.
Susa umuthi wokupakisha wejet ijubane. Miselela isilayida somoya ngezikulufo ezi-4 ezikhuphukayo. Faka esikhundleni se-slow speed packing nut nenaliti. Manje usungaqinisa umuthi wokupakisha ukuze uthinte ama-washer okupakisha ngenaliti. Qiniseka ukuthi ungadluli ngokweqile. Inaliti yesivinini esisheshayo kufanele ikwazi ukujika ngeminwe yakho kodwa ngomshikisho owenele wokubamba ukulungiswa. Usebenzisa iminwe yakho, ujije izinaliti ezihamba kancane nezisheshayo kuze kube yilapho uthwebula bese ubuyisela emuva u-1.5 njengendawo yokuqala yokulungiswa. Miselela ipuleti lobuso, binda inkinobho nezinkinobho ezihamba kancane futhi ezinejubane elikhulu.
carburetor lakho manje babuyelane futhi isilungele ithangi ukuhlolwa kanye ukulungiswa.
Ukulungisa Lowo oPhakeme futhi Speed ​​Slow Needle Amaphayiphu
Ukulungisa i-carburetor ethangini akufani nokulungisa amanzi avulekile. Ungenza izilungiselelo zokuqala ethangi bese ulungisa kahle amasethingi uma usuphumile emzimbeni wamanzi.
Isikulufa phansi (isivinini esisheshayo) inaliti kuze ohlezi bese ngibuye ngiphume 1 ithuba.
Isikulufa phezulu (ijubane elinensayo) inaliti untill ohlezi bese emuva 1.5 iphendula.
(Speed ​​High) Qala injini (uzogcwala kuhle anolaka), ucabange ukuthi ubhekene igiya phambili, kuthathe mpintsha ogcwele. Ngo izingxenye 1 / 8 ithuba, elinde injini ukuphendula ekujikiseni, uqale turning phansi ngejubane eliphezulu inaliti valve. Uzoba abafikayo kuyilapho injini kuyofakazela uqale ukucima noma ngamathe emuva (Kuzwakala kuyisixazululo nomkhwezeli omnene). Ngaleso sikhathi, emuva inaliti umphini 1 / 4 ithuba. Phakathi ijika 1 / 4, uzothola kulungiselelwa abushelelezi.
(Okuphansi Speed) Yehlisa injini phansi lapho nje ihlala isebenza. Shift zibe hlangothi. Nalapha e izingxenye 1 / 8 kujika, qala ukuze ujike phezulu inaliti valve e. Linda imizuzwana embalwa ukuze injini ukuphendula. Njengoba uvula valve e, i-RPM kuyokhula. Wehlisa RPM futhi lapho injini ngeke nje uhlale egijima. Ekugcineni uzoba hit iphuzu lapho injini ufuna ukucima noma uzophiwa ukumkhafulela emuva. Nalapha futhi, ngaleso sikhathi, emuva valve 1 / 4 ithuba. Phakathi ijika 1 / 4, uzothola abushelelezi kancane kulungiselelwa isivinini.
Lapho usuqedile ukulungisa ngenhla, uzoba asikho isizathu uzihambise futhi ngaphandle uma carburetor Amaphutha / izinsini phezulu esibhakabhakeni esuka ehlezi, kuleso simo wena kuzodingeka ukususa, ahlanzekile, futhi akhe kabusha carburetor kunjalo.